Vaovao farany Lingua volana May 2020 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2020 4:59 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana May 2020.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 678 isika, nahasarika mpitsidika 348.605 ary jeripejy miisa 436.612. Nahatratra 257.333 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 262.348 tao amin'ny Twitter.
Ity ny topi-maso mikasika ny fandehan'ny tranonkala rehetra tamin'io volana io.
Nalaza tamin'ny fifaninanana fandikan-teny Tseky ny tantaran'ny Global Voices mikasika ny lohahevitry ny COVID-19 !
Nanatontosa antsafa niaraka tamin'i Ashwani Murmi, mpitantana ny fandikan-teny Santali Lingua, ny Rising Voices !
Namoaka ny Torolàlana momba ny Fifandraisana sy ny Fiarovana isika – volana Mey
Arabo ar 120.932
Espaniola es 19.478
Frantsay fr 17.075
Amharic am 8.836
Arabo ar 42.001
Bangla bn 8.302
Espaniola es 7.544
Frantsay fr 5.560
Misaotra betsaka anareo ry Lingua tamin'ny fandraisana anjara ataonareo sy ny fotoana atolotrareo ! Tohizo ny asa mahafinaritra ataonareo ! Tandremo ny fahasalamanareo ary arovy ny tenanareo !